Native Americans တွေအားဖြင့်တချို့ကတီထွင်မှုဘာတွေလဲ?
တီထွင်မှု, လိမ္မာပါးနပ်နဲ့ Native Americans တွေ
native အမေရိကန်တွေ အမေရိကန်လူနေမှုအပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် - နှင့်ဥရောပအခြေချနေထိုင်သူများမြောက်အမေရိကမြေပေါ်တွင်ရောက်ရှိမတိုင်မီ native အမေရိကန်တီထွင်မှုများ၏အများစုရှည်လျားလာ၏။ ရုံ Native Americans တွေ '' သက်ရောက်မှု၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အဘယ်မှာရှိကမ္ဘာ့အစေး, ချောကလက်, ဆေးထိုးပိုက်, ပေါက်ပေါက်နှင့်မြေပဲမပါဘဲဖြစ်ပါ့မလား ရဲ့အများအပြား Native အမေရိကန်တီထွင်မှု၏အနည်းငယ်မှာကြည့်ကြရအောင်။
အနောက်ကမ်းခြေပထမဦးစွာပြည်သူ့ပထမဦးဆုံး Totem တိုင် Raven ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဒါဟာ Kalakuyuwish, အမည်ရှိ၏ "မိုဃ်းကောင်းကင်တက်ရရှိထားသူသောတိုင်။ " အဆိုပါ Totem ထမ်းဘိုးကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဝံ, ကျီး, ဝံပုလွေ, ဆော်လမွန်ငါးသို့မဟုတ်လူသတ်သမားဝေလငါးအဖြစ်တိရစ္ဆာန်ကနေအမြိုးရဲ့နွယ်ဖွားယင်းသည်မိသားစုမောက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
စွယ်စုံကျမ်း Britannica အရ, Totem ထမ်းဘိုးအမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာသူတို့တွင်ဥပမာ, ကို "အောက်မေ့ဖွယ်, ဒါမှမဟုတ် Herald, ထမ်းဘိုး, အိမ်တအိမ်အတိတ်ပိုင်ရှင်ကိုဂုဏ်ပြုရန်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ပစ္စုပ္ပန်တဦးတည်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့လက်အားပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာစိုက်ထူရှိပါ၏သင်္ချိုင်းတွင်းအမှတ်အသားများ, ခေါင်မိုးကိုထောကျပံ့ပေးသောအိမ်သူအိမ်သားရေးသားချက်များ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အိမ်တော်ထဲသို့ဝင်ရသောမှတဆင့်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသည်သောပေါ်တယ်ထမ်းဘိုး, ။ အဆိုပါကမ်းနား၏ပိုင်ရှင်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစွန်းမှာနေရာချခြင်းနှင့်ကြိုဆိုပွဲထမ်းဘိုးကို, "
အဆိုပါစကားလုံး "toboggan" "ပြား" နှင့်အဓိပ္ပာယ်စကားလုံးနှစ်လုံးပေါင်းစပ်သော Chippewa အဘိဓါန်စကားလုံး "nobugidaban," ၏ပြင်သစ် mispronunciation ဖြစ်ပါတယ် "ဆွဲ။ " ဒီ toboggan အရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေဒါ၏ပထမဦးစွာနိုင်ငံများအသင်း့လူနှင့်စွတ်ဖားစီးခြင်း၏တီထွင်မှုဖြစ်ပါသည် ရှင်သန်မှုဝေဖန် tools တွေရှည်, ကြမ်းတမ်းဝေး-မြောက်ဘက်ဆောင်းရာသီရှိကြ၏။
အိန္ဒိယမုဆိုးပထမဦးဆုံးဆီးနှင်းကိုကျော်ဂိမ်းသယ်ဆောင်ရန်အခေါက်၏ဖန်ဆင်း toboggans တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Inuit (တစ်ခါတစ်ရံ Eskimos ခေါ်) whalebone ၏ toboggans အောင်ဖို့အသုံးပြု; ရှေ့စွန်းတိုင်အောင်ပြန်ကွေးနှင့်အတူမဟုတ်ရင်တစ် toboggan, hickory, ပြာသို့မဟုတ်မေပယ်၏ strips တွေ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ toboggan များအတွက်ခရီးစကားလုံး "utabaan ။ " ဖြစ်ပါတယ်
Tipis, ဒါမှမဟုတ် tepees, အဆက်မပြတ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသောမဟာ Plains ပထမဦးစွာလူကစတီထွင်ခဲ့ wigwams ၏အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ကြသည်။
Native Americans တွေတီထွင်ကြောင့်အိုးအိမ်ခုနစ်အဓိကစတိုင်များအဆိုပါ wickiup, wigwam, longhouse, tipi, Hogan, လုံးထွင်းနှင့် pueblo ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားခြေသလုံးဇာတိအမေရိကန်များပြင်းထန်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာလေတိုက်နှုန်းဆန့်ကျင်ထရပ်နိုင်သော်လည်းမျောနွားများကိုလိုက်နာဖို့ခဏရဲ့အသိပေးစာမှာဖျက်သိမ်းစေခြင်းကြံ့ခိုင်နေရာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ လှငျပွငျအင်ဒီးယန်းသူတို့ရဲ့ tepees ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကျွဲဟာရှသားရေကိုသုံးခြင်းနှင့်အိပ်ယာအဖြစ်။
အဆိုပါစကားလုံး "ယပ်လှေ" "မုဆိုးရဲ့လှေ" ကိုဆိုလိုတယ်။ ဤသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး tool ကအအေးပိုင်းအာတိတ်ရေထဲမှာအမဲလိုက်ဖျံနှင့် walruses အဘို့နှင့်အထွေထွေအသုံးပြုမှုအတွက် Inuit ပြည်သူ့တီထွင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ Inuits, Aleut အသုံးပြုသောနှင့် Yupik, whalebone သို့မဟုတ် driftwood လှေကိုယ်နှိုက်ကဘောင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့လေထုနှင့်ပြည့်စုံဆီးအိမ် frame ကိုကျော်ဆန့်ခဲ့သည်တံဆိပ်ခတ်ထား - ကိုယ်။ ဝေလငါးအဆီရေစိုခံလှေနှင့်အရေခွံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါဘုစပတ်သစ်သားအခေါက်နူးအရှေ့မြောက် Woodlands အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်တီထွင်သူတို့ကိုခရီးဝေးမှခွင့်ပြု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူတို့ရဲ့အဓိက mode ကိုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစက်လှေဖြင့်သဘာဝရင်းမြစ်များအမြိုးအနှယျမှအဓိကအားဖြင့်မရရှိနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့၏မြေများ၏သစ်တောများနှင့်သစ်တောများအတွင်းတွေ့ရှိရဘုစပတ်သစ်သားသစ်ပင်များ၏ဘာပဲလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစကားလုံးက "နူးက" စကားလုံးလုံးထွင်းအဓိပ္ပာယ် "kenu," ကနေအစပြု။
ဘုစပတ်သစ်သားအခေါက်ကနူးက built-in များနှင့်ခရီးထွက်သောအမျိုးအနွယ်အချို့သည် Chippewa အဘိဓါန်, Huron, Pennacook နှင့် Abenaki ပါဝင်သည်။
ဟော်တီထွင်နှင့် Iroquois နှင့် Huron ပြည်သူ့အားဖြင့်ပြန့်နှံ့ခဲ့သည် - New York နဲ့အွန်အတွက်စိန့်လောရင့်မြစ်တစ်ဝှမ်းအသကျရှငျအရှေ့ Woodlands Native အမေရိကန်အမျိုးအနွယ်။ ခြာရိုကီ ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်စဉ်းစားခဲ့လို့ "စစ်ပွဲ၏နည်းနည်းအစ်ကို" ဟုအဆိုပါအားကစားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Iroquois ၏ခြောက် Tribes ယခုတောင်ပိုင်းအွန်နှင့်နယူးယောက်အထက်ပိုင်းသည်အဘယ်အရာအတွက်, ဂိမ်း "baggataway," သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဗားရှင်းကိုခေါ် "tewaraathon ။ " အဆိုပါဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောအတူတကွ Iroquois ၏တိုက်ခိုက်ရေး, ဘာသာရေး, ကစားနည်းနှင့်ခြောက်လနိုင်ငံများအသင်း (သို့မဟုတ် Tribes) ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဖြစ်အားကစားအပြင်ရိုးရာရည်ရွယ်ချက်များ, ရှိခဲ့ပါတယ်။
Moccasins - deerskin သို့မဟုတ်အခြားအပျော့သားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖိနပ် - အရှေ့မြောက်အမေရိကအမျိုးအနွယ်နှင့်အတူဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစကားလုံး "moccasin" ဟုအဆိုပါ Algonquian ဘာသာစကား Powhatan စကားလုံး "makasin" မှဆင်းသက်လာ; သို့သော်အများဆုံးကအိန္ဒိယအနွယ်တို့တွင်ထိုသူတို့အဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဇာတိစကားလုံးများကိုရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အပြေးနှင့်အိမ်ပြင်ရှာဖွေစူးစမ်းအတှကျအသုံးပွု, အမြိုးအနှယျယေဘုယျအားဖြင့်ပုတီးအလုပ်, အ quill အလုပ်နှင့်ခြယ်ဒီဇိုင်းများအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ moccasins များ၏ပုံစံများဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က MRI
နောက်ဆုံး 300 နှစ်များ၏အများစုမှာ Impact တီထွင်မှု
အဆိုပါ 2016 ROUSH Warrior Mustang
တစ်ဦး Flounder ရှင်းလင်းနည်း - Flounder သန့်ရှင်းရေးညွှန်ကြားချက်များ
( 'နားလည်ပါမှ') ပုံမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Entender '' Conjugating
ရယ်စရာအကောင်းဆုံး Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
သမ္မတနိုင်ငံက F-105 Thunderchief: ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတောရိုင်းကြွက်
က Man Glass ကိုကော်ဖီဇယားထဲမှာသေဇနီးသိမ်းထားပြီး!
တစ်ဦးက New ဆီ Tank Installing
တမန်တော်ယောဟန်ကဖြည့်ဆည်း: 'တပည့်သညျယရှေုခ' '
အဆိုပါ CCNA စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေ
လက်ရှိ LSAT ရမှတ် percentile
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်လိုက်လျောကဘာလဲ?
Villanova University မှအဆင့်လက်ခံရေး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်အခြားလှည်စကားစာလုံးပေါင်းနည်း Remembering များအတွက်သိကောင်းစရာများ